Sida loo helo fikradaha blog adoo adeegsanaya Google
Isniin, February 14, 2011 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Michael Reynolds
Sidaad ogtahay, baloog garaynta waa wax weyn suuq-geynta dhaqdhaqaaqa waxayna u horseedi kartaa darajooyinka mashiinka raadinta oo la hagaajiyo, kalsooni xoog leh, iyo joogitaan wanaagsan oo warbaahinta bulshada ah.
Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah dhinacyada ugu adag ee balooggu wuxuu noqon karaa fikrado. Fikradaha Blog waxay ka imaan karaan ilo badan, oo ay ku jiraan isdhexgalka macaamiisha, dhacdooyinka hadda jira, iyo wararka warshadaha. Si kastaba ha noqotee, hab kale oo weyn oo lagu helo fikradaha balooggu waa in si fudud loo isticmaalo kan cusub ee Google natiijooyinka degdega ah feature.
Habka loo adeegsado tan waa in la bilaabo qorista ereyada muhiimka ah ee la xiriira warshadahaaga, ka dibna eeg waxa Google kuu buuxinayo adiga. Tusaale ahaan, noo oggolow inaad maamusho a blogka cuntada oo waxaad raadineysaa fikrado. Waa kuwan tusaalooyin raadinta aad sameyn karto:
Adiga oo si fudud u garaacaya "cunista banaanka" sanduuqa raadinta, waxaa laguu soo bandhigayaa qaar keyword dabo dheer ikhtiyaarrada u rogi kara mawduucyada barta. Waa tan tusaale kale:
Adiga oo si fudud ugu bilaabaya raadintaada “cuntada”, waxaad heleysaa fikrado deg deg ah oo isu rogi kara cinwaano waaweyn. Tusaale ahaan:
“Cunnooyinka shabakadda cuntada: wixii aysan TV-ga kaaga sheegin”
"Tilmaamaha haramka cuntada: wareysi lala yeeshay seddex khubaro maxali ah oo nafaqada"
Adoo ku bilaabaya cinwaankaaga blog ereyadan raadinta, waxaad la jaanqaadeysaa mawduucaaga barta weedho ay dadku dhab ahaantii raadinayaan, taas oo kordhinaysa fursadahaaga in lagugu helo raadinta Google.
Haddii aad ku dhegto oo aadan la imaan karin mowduuc bartaada xigta, madaxa u gal Google oo ku tuur ereyo ku saabsan meheraddaada. Waxaad ka heli kartaa fikrado waaweyn oo sidoo kale hagaajin kara SEO-gaaga.
Tags: Analyticsnatiijooyinka ganacsigaKartidhinacyo badanxawaaraha boggaSuuq GoobidSliderWordPress
Michael waa Madaxweynaha & Maamulaha shirkadda SpinWeb, oo ah hay'ad dijitaal ah oo wax geynaysa naqshadeynta websaydhka xalka iyo marketing digital. Michael waa la aqoonsan yahay oo Suuqgeyn (Inbound Marketing) oo wuxuu si heer qaran ah uga hadlaa munaasabadaha warshadaha.
SEO kuma istaageyso bartaada internetka
Baraha Bulshada oo ku baxa Kordhinta 18% + 5 Sano gudahood
Feb 20, 2011 markay ahayd 8:04 PM
Waxaan ahay wax kucusub barta blogga (http://jasonjhr.wordpress.com/) oo aad dhib kala kulantay inaad la timaado fikradaha boostada. Tani waa khiyaano weyn oo kaa caawinaysa inaad xoogga saarto fikradaha qaarkood, lagana yaabee inaad hesho kuwo cusub.
Miyaad u maleyneysaa inaad sidan sameyso waxay kaa caawin doontaa SEO iyo xulashada ereyada sidoo kale?
Febraayo 22, 2011 saacadu markay tahay 2: 07 AM
Waxaan u maleynayaa sidaas, maadaama aad isku toosinaysid mawduucyadaada barta raadinta caanka ah ee Google. SEO waxay ku lug leedahay qaybo badan oo dhaqaaq ah, in kastoo 🙂
Hal Suuq geyn
Mar 28, 2011 at 4: 12 PM
Akhris weyn. Waxay muhiim u tahay shirkadaha inay sii wadaan ku shubida waxyaabaha cusub ayna la yimaadaan fikrado cusub oo ku saabsan waxyaabaha caadiga ah waxay noqon karaan kuwo dhib badan. Waa muhiim inaad fariisato oo aad sii qorsheysato ka hor, waqti aad siiso oo aad diiradda saarto istiraatiijiyaddaada waxyaabaha ku jira. Laga soo bilaabo darajaynta Google ilaa isku xidhka dhismaha, waa u qalantaa waqtiga iyo dadaalka!
Jul 10, 2016 markay ahayd 8:39 AM
Talooyinka cajiibka ah, waxaan door bidaa inaan qaato fikradaha maalinba maalinta ka dambeysa si aan u soo bandhigo qaabka ugu dhaw ee akhriska akhristaha.